राष्ट्रिय झण्डाको स्वरुप विगार्ने भारतीय दूतावास ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
राष्ट्रिय झण्डाको स्वरुप विगार्ने भारतीय दूतावास !
जनकपुरधाम । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका बेला जानकी मन्दिर परिसरको मञ्चमा स्वरुप बिग्रेको नेपालको राष्ट्रिय झण्डा भारतीय दूतावासले राखेको खुलेको छ। भारतीय सूरक्षाकर्मीले दुई देशका झण्डा राखेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा उल्लेख छ।
त्यसै काराेबार दैनिकले माेदी विद्युत व्यापार सम्झाैताकै पक्षामा भन्ने खबर छापेकाे छ। उसले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदी दुइृ देशबीच भएकाे व्यापार सम्झाैता कै पक्षमा देखिएका छन्। भारतीय अडान यथावत भन्ने खबर कान्तिपुर दैनिकले लेखेकाे छ।
पूर्वराजदूतहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमाेदी नेपाल मामिलामा यसअघिकाे एजेन्डाबाट टसमस नभएकाे बताएका छन्। राजनीतितक शक्तिबाट नेपाललाई प्रभावमा पार्न नसकिने देखेपछि माेदीले सफ्ट पावर नीति अपनाएकाे उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको कार्यकाल दुई वर्ष हुने
काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पदावधि मात्र दुई वर्ष कायम भएको छ । सोमबार […]
पोखरा । ‘सुखी, खुसी, सभ्य र समिद्ध सहर’ को परिकल्पना गर्दै पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ […]
१५० सिसि ट्वीन डिस्कको नयाँ पल्सर नेपाली बजारमा, मूल्य निकै सस्तो !
काठमाडौं । एचएच बजाजले अल न्यू बजाज पल्सर १५० ट्वीन डिस्कलाई नेपाली बजारमा बिक्री वितरण सुरु गरेको छ । यसमा […]
एजेन्सी । स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफूमाथि लागेको आरोप स्वीकारेका छन् । यसअघि उनले कर छलीको […]